अमिताभलाई 'अमित जी' नभनेपछि कादर खानलाई फिल्मबाटै निकालियो (भिडियोसहित)
एजेन्सी । बलिउड फिल्म जगतका चर्चित कलाकार कादर खान हाँस्यकलाकारका साथै खलनायकको भूमिकामा प्रसिद्ध छन् । उनले बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनका लागि फिल्ममा कैयौं संवादहरु लेखेका छन् ।
अर्कोअर्थमा भन्नुपर्दा अमिताभ बच्चन यो उचाईमा पुग्नुमा कादर खानको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । तर उनै अमिताभलाई एकपटक कादरले अमित जी नभनेपछि उनलाई फिल्मबाटै निकालिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा आजपनि उक्त भिडियो रहेको छ जसमा कादर खान बताइरहेका छन् कि कसरी उनलाई फिल्महरु प्राप्त हुन छाडे र अमिताभ बच्चनलाई 'अमित जी' नभन्नुको कारणले फिल्मबाट हटाइयो ।
उनले बताएका छन्, म अमिताभ बच्चनलाई अमित भनेर बोलाउँथे । एकपटक एक निर्माता मसँग बोले कि तपाईले सर जीलाई भेट्नुभो ? मैले सोधेँ, को सर जी ? त्यसपछि निर्माताले तपाईलाई थाहा छैन भनेर अमिताभतर्फ इशारा गरे । त्यसपछि मैले उनी त अमित हुन् भनेर भने । सबैले त्यसबेला अमिताभलाई सर जी बनेर बोलाउथे । तर मेरो मुखबाट उनलाई कहिल्यै अमित जी या सर जी भन्ने शब्द निस्किएन । बस यही कारणले मलाई उक्त टिमबाट निकालिएको थियो ।